Waa maxay sababta Netflix iyo barnaamijyada kale ee macruufka aysan ugu soo bixin macOS - Tech - Numerama - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Maxaa Netflix iyo barnaamijyada kale ee macruufka aysan uga soo bixin macOS - Tech - Numerama
Apple waxay horay ugu sii soconaysaa isu-imaatinka. Laakiin haddii aaladda la dhammaystiro, habka qaybinta ayaan weli ku habboonayn dhammaan horumariyeyaasha.
wada isku dhafka ayaa yidhi ? Sanadihii la soo dhaafay, kani waa eray aan aad iyo aad uga maqalno afka ku hadla Apple Inta udhaxeysa iPad Pro iyo caalamka MacBook, soohdinku way sii yaraanayaan sanadba sanadka ka dambeeya. Oo waxa run ku ah adeegsiga ayaa bilaabaya inuu ku jiri karo codsiyada: WWDC 2019, Apple wuxuu ku dhawaaqay furitaanka dhammaan soo-saareyaasha tijaabiyaha Catalyst, iyada oo ay jirto helitaanka dadweynaha ee sii deynta macOS Catalina. Si loo dhigo si dhakhso leh, Catalyst waa hab loo soo bandhigay sida fudud in loo keeno barnaamijyada macruufka ee loo yaqaan 'Mac Universal'. Apple waxay u isticmaashaa codsiyada qaarkood, sida Guriga ama Xusuus-wadayaasha oo la wadaaga isla lambarka isha.
Laakiin halkan, Catalina way maqantahay iyo cimilada xun ee codsiyada macruufka ee macOS ma dhicin - waxaan tirineynaa 24. Qaar ayaa la qorsheeyay, sida Twitter, oo damacsan inay ka faa’iideystaan ​​fursadda ay ugu laaban karaan macOS codsi ayagoo adeegsanaya hooyo. Laakiin qaar kale uun ima iman doonaan, sida Netflix kaasoo ku dhawaaqay in arjiga uusan ku jirin barnaamijka hada. Ubaxhorumariyayaashu waxay muujiyeen dhibaatooyin gudaha xidho barnaamijyo. Raadin ay wadaageen horumariye sare oo ka tirsan shirkadda Numerama ee ka shaqeysa is dhexgalka noocan, oo door bidaaya in aan wali la aqoonsan: Isbeddelku waa mid cajiib ah, laakiin intaas oo keliya ma aha. Waxay u baahan tahay shaqo iyo hagaajin badan ".
Barnaamijyada '24 iPad' ee ku yaal Mac App Store // Source: Numerama
Natiijooyinkaan ayaa la filayay. Ma qiyaasi karnaa barnaamij kombuyuutar oo dib u qori kara koodka adigoon ka tagin wax qalad ah ama si caqli gal ah ulaqabsanaya interface - taas oo ah inaanu isku mid aheyn taabashada ama tilmaame. Laakiin taasi wax kasta sharraxaad kama bixinayso. Dhibaatada Catalyst waqtiga lagu siidaayo macOS Catalina waa mid aasaasi ah oo toos ah ugu yimaada habka loo qaybiyay barnaamijyada.
Laba barnaamijyo aad u kala duwan
Maanta, marka horumariye abuuro barnaamij loogu talagalay ecosystem-ka Apple, isaga islamarkaana koodhkiisa oo kujira isla "fayl" kaasoo koobaya noocyada kala duwan ee dalabka: iPhone, iPad, Apple TV, iwm. Tani waxay u oggolaaneysaa in la sameeyo qalliin la mid ah, metadata la wadaago, soo noqnoqda isla cusbooneysiinta iyo tan ugu muhiimsan, hal codsi oo lagu iibsado haddii loo baahdo. Bii'ada Apple waxay u baahan tahay, haddii nooca barnaamijka aad ka iibsato iPhone-kaaga laga heli karo Apple TV, si otomaatig ah ayaa loo rakibi doonaa.
Dhanka macruufka, barnaamijka 'Carrot app' ee aan iska leenahay waa qiimaha '5,49 €'. Waxay ku kacaysaa 3 jeer qiimahaan on macOS. // Xigasho: Shaashadda Numerama
Soosaarahu kuma daro nooca Mac of this codsi caalami ah. Waxay u rogaysaa barnaamijka macruufka ee barnaamijka Mac. Taas macnaheedu waa in uu jiro geedi socod kale oo soo gudbinta oo dhan oo lagu dari doono Mac App Store. Waana meesha ay ku dhegan tahay: waa codsi kale. Hadday bixinayso, adeegsaduhu waa inuu iibsadaa laba jeer. Haddii lacag-bixinnada gudaha ah lagu soo iibiyo hal dhinac, loogama wareejin doono dhinaca kale. Haddii barnaamijka lagu rakibo macruufka, si toos ah looma soo bandhigi doono macOS.
Waxaa ka sii xun: maalinta Apple soo afjari doono fikradeeda isku xirnaanta, adeegsadayaasha ku rakibay barnaamijka "Catalyst" waxay ku dhamaan doonaan codsi labaad "asal ahaan iyo mid guud" si loo rakibo, kaas oo noqon doona mas'uulka kaliya, midka kale si lama filaan ah u qiimeeyay. Qaabeyn rasmi ah oo loogu talagalay qofka xilliyeed, laakiin hadda qiyaaso inaad tan ula xiriireyso bulshada guud: waa inay noqotaa ku dhawaad ​​adeeg furan. Waxaan fahamsanahay in Netflix aysan qatar gelinaynin.
Xal dhexdhexaad ah?
Mid ka mid ah xalalka Apple ay bixin karto waa taageero daahfuran u adeegsadaha codsi ah "Mac" codsi "caalami ah" maalinta la heli doono. Dhanka ishaheenna, tani waxay calaamad wanaagsan u noqonaysaa isla markaana xannibineysaa xaaladda, laakiin Apple weli kama aysan hadlin aaladdaas. Tan iyo markaas, horumariyayaal badan, gaar ahaan codsiyada caanka ah, waxay ku jiraan marxalad sugitaan marka laga tagayo macOS-da cusub.
« Tani maahan wax la yaab leh, maxaa yeelay wax walba waxay ku jireen dukumintiga dadweynaha », Waa nala xaqiijiyay. Haddii maaddada loo daaweeyo maanta oo uu galo iftiinka, waa sababta oo ah Catalina way soo baxday oo adeegsadayaasha raacay xayeysiiska ayaa laga yaabaa inay aad ugu qanacsanayeen astaantan. Maanta, way adag tahay in lagula taliyo in la iibsado (badanaa qaali ah) codsi laba jeer: Apple si fiican ayaa loo sheegay, mustaqbalku wuxuu noqon doonaa mid iskuxiran oo ka dhexeeya aagaga. Waa maxay "goorta" iyo "sidee" ee loogu sii jiri karaa.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.numerama.com/tech/559838-pourquoi-netflix-et-dautres-apps-ios-ne-sortent-pas-sur-macos.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=559838